Jaona 19:25-30 "25 Ary nijanona teo akaikin’ny hazo fijalian’i Jesosy ny reniny sy ny rahavavin-dreniny, Maria, vadin’i Klopa, sy Maria Magdalena. 26 Ary nony hitan’i Jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tiany nijanona teo, dia hoy Izy tamin’ny reniny: Ravehivavy, indro ny zanakao! 27 Ary hoy koa Izy tamin’ilay mpianatra: Indro ny reninao! Ary tamin’izany ora izany dia noraisin’ilay mpianatra ho any aminy izy. 28 Ary rehefa afaka izany, dia fantatr’i Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin’izay, mba hahatanteraka ny Soratra Masina, dia hoy Izy: Mangetaheta Aho. 29 Ary nisy bakoly feno vinaingitra nipetraka teo; ary nisy sipaonjy feno vinaingitra notohiziny tamin’ny hysopa ka nataony tamin’ny vavany. 30 Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy, dia nanao hoe: Vita; dia nanondrika ny lohany Izy ka nanolotra ny fanahiny."
Rehefa ho faty ny olona matetika dia mamela hafatra farany. Hitan’ny Tompo teo akaikin’ny hazofijaliana ny reniny sy ilay mpianatra tiany, i Jaona izany. Nalahelo ny reniny sy ilay mpianatra Izy ka nampifandray azy mianaka. Nahazo zanaka i Maria na dia maty aza i Jesosy, nahazo reny kosa i Jaona. Mahafinaritra e! manova zavatra eo amin’ny fiainana ny fisian’i Jesosy. Nijaly ny Tompo teo ambony hazofijaliana. Inona no nahazo Azy? Dia inona no nomena Azy mba hanala ny hetahetany? Mampihena ny fanaintainana hono ny vinaigitra. Mafy mihitsy ny nahazo e! fitiavany ahy sy ianao anefa no niaretany izao. Ny fankatoavana Azy sy ny fanaovana ny sitrapony isan’andro no valim-pitia omentsika Azy.
Inona ny teniny farany? ………… Vita ny famonjena ahy sy ianao. Vita koa ny iraka nampanaovina Azy. Anjarao sisa no misafidy.